မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ဦးကောဝိဒ အမှတ်ရသမျှ - by မောင်ရစ် - Short, Simple and Easy to Remember Dhamma Note, DhammaWeb မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ဦးကောဝိဒ အမှတ်ရသမျှ by မောင်ရစ်
မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ဦးကောဝိဒ အမှတ်ရသမျှ
မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ဦးကောဝိဒလို သာသနာပြု ဆရာတော်ကြီးတပါးကို ကျနော်တို့ တွေ့ ကြုံ ဆုံခွင့်ရဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ပါ။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေတဲ့အချိန်၊ ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေနဲ့ပူပြင်းတောက်လောင်နေတဲ့ လူတယောက်အနေနဲ့ သူတော်ကောင်းတဦး၊ ပညာရှိတဦး၊ မြင့်မြတ်ကြီးကျယ်တဲ့ ဆရာတော်ကြီး တစ်ပါးကို ဖူးတွေ့ ကြုံဆုံဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်။ သို့ ပေမဲ့ မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အတွက် အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာ အစွမ်းကုန် ထိခိုက် စော်ကားနင်းခြေခံလိုက်ရတဲ့အချိန်၊ စစ်ဘီလူးတို့ က သံဃာသွေးနဲ့ စစ်ဖိနပ်ကို ဆေးတဲ့အချိန်၊ သာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ခိုကိုးရာမဲ့ မပဋာမြေလူးသလို ဖြစ်နေရတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့ တတွေအတွက် ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့ အစွမ်းရှိသမျှ အကျင့်၊ သီလ၊ ကုသိုလ်၊ ပညာ အစွမ်းကုန် အားထုတ်လို့ ရပ်တည်လို့ လာခဲ့တယ်။ အဲဒါ ကျနော်ဘ၀အတွက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုတခုကို ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့ရတာပဲ။
ဘုရားရှင်က သံဃာတော်တွေအတွက် သာသနာကိုစော်ကားသူတွေကို ပြန်လည်နှိမ်နှင်းချေချွတ်ဖို့ ၊ သာသနာကို ကာကွယ်ဖို့ ပေးထားခဲ့တဲ့ ညွှန်ကြားပြသထားခဲ့တဲ့ တခုတည်းသောလမ်း- သံဃာတော်တွေရဲ့ သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ ခြေလှမ်းကိုရှေ့ ကလည်းမြဲမြဲကြီး လှမ်းခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ကြီး။ ပြီးတော့ အဲသည်အတွက် ရဲရဲကြီးရပ်တည် စံပြုဟောပြောခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ကြီး။ဆရာတော်ကြီး အခု မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ အဲသည်သာသနာ့ရန်ကို ကာကွယ်တဲ့လမ်း၊ သပိတ်မှောက်ကံဆောင် နေဆဲ သံဃာတော်တွေရဲ့ အဆင့်ဆင့်သောခြေလှမ်းတွေနောက် ကျနော်တို့ တတွေ တကောက်ကောက် လိုက်လံပံ့ပိုး ရဲရင့်ကြဖို့ ပဲဆိုတာကို ဆရာတော်ကြီးက ပြသခဲ့ပြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတက္ကသိုလ်ဆိုတာက ခရစ်ယာန်သာသနာပြုတက္ကသိုလ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီက အသက်စွန့် ပြီး ခရစ်ယာန်သာသနာပြုကြတဲ့ ရဲရင့်သူတွေကို ဂုဏ်ပြုကြသလိုမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်တွေရဲ့အသက်စွန့် ပြီး သာသနာတော်ကို ကာကွယ်ကြတဲ့ သံဃာသပိတ်မှောက်ကံဆောင်မှုကို တလေးတစားနဲ့ ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီအခမ်းအနားကို သပိတ်မှောက် သံဃာတော်တွေကိုယ်စား ဆရာတော်ကြီးတက်ရောက်ပြီး အပူဇော်ခံခဲ့တာကလည်း ကျနော့်အတွက် အမှတ်တရဖြစ်ရပါတယ်။
အဲသည်မှာ ဆရာတော်ကြီးပြောကြားခဲ့တဲ့ အမှာစကား – အသိဥာဏ်ပညာရှိမှသာ မိမိကိုယ်တိုင် သာမက သူတပါးအကျိုးကိုပါဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊ စောင့်ရှောက်နိုင်သူ ဖြစ်မယ်…တဲ့။ ဘုရားရှင်ရဲ့ စကား၊ သူ့ ဘ၀နဲ့ ထမ်းပိုးပြီး လျှောက်လာခဲ့သူ။ ပြီးတော့အပြောနဲ့ အလုပ် တထပ်တည်းကျ အသိဥာဏ်ပညာနဲ့ ရပ်တည်သူ။ ဆရာတော်ကြီးမှာ အခြွေအရံတွေ လျော့နည်းမှာ၊ လာဘ်လာဘ ဆိတ်သုဉ်းမှာ၊ ခရီးလမ်းပန်း ကြမ်းတမ်းမှာတွေကို တချက်ကလေးမှ ငဲ့မကြည့်ခဲ့သူ သံဃာတော် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမှ ငါက ထွက်မရပ်ဘူးဆိုရင်၊ မြန်မာပြည်က ငါ့ရဲ့ စာသင်သား သံဃာငယ်တွေ၊ အနာဂတ်သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ့် ဘုရားသားတော် ရဟန်းတော်တွေအတွက် ငါ အလကား ဖြစ်တော့မှာပေါ့လို့ အသက်၈၀နီးပါ ဆင်းရဲ ချည့်နဲ့ချို့ တဲ့တဲ့ သံဃာအိုကြီးတစ်ပါးက ရဲရဲတောက် မိန့် ကြားလိုက်တာကို နားနဲ့ ဆတ်ဆတ်ကြားခွင့်ရခဲ့တယ်။ သူ့ မှာ သာသနာပြုဖို့ ၊ စေတီတည်ဖို့ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ဆောက်ဖို့ ၊ ကိုရင်ငယ်လေးတွေကို ကျွေးမွေးဖို့ တရားဟောရင်း ဆွမ်းခံရင်း အလှူခံရရှိသမျှကို စုဆောင်းထားသမျှ မြန်မာပြည်တွင်းက သာသနာကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ၊ သပိတ်မှောက် သံဃာတော်တွေကို ကာကွယ်ဖို့ မတွန့် မဆုတ်ပေးလှူခဲ့တယ်။ တရားပွဲတွေကို လိုက်ဟောရင်း အလှူခံရတဲ့ ၀တ္တုငွေတွေနဲ့ သာသနမောဠိ ဆိုတဲ့ သံဃာ့အဖွဲ့ အစည်းကြီး ထူထောင်ဖို့ လည်း အိပ်မက်မက်ခဲ့သူ ဆရာတော်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အမျိုးသားရေးအတွက် စွမ်းဆောင်နိုင်မယ် ထင်တဲ့ ဒကာ၊ ဒကာမတွေ၊ အဖွဲ့ အစည်းတွေကိုလည်း ဆရာတော်ကြီးကရင်ဖွင့်ပြီး ကြိုဆိုခဲ့တယ်။ မျှော်လင့်တကြီးနဲ့အားကိုးတကြီးနဲ့တိုင်ပင် ဆွေးနွေးလေ့လာဖို့ကြိုးစားတာကို တွေ့ ခဲ့ရတယ်။အမျိုး ဘာသာ သာသနာအတွက် မြန်မာအမျိုးသားတွေ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ကျောချင်းကပ်ကြဖို့ ၊ စည်းရုံးညီညွတ် ချစ်ခင် ရိုင်းပင်းကြဖို့ ကို အားထုတ်ခဲ့တယ်။ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ အနီးကပ် ကပ္ပိယတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုတင်မျိုးအောင် စားဝတ်နေရေးအလုပ်က ညဥ့်နက် သန်းကောင်ပြန်လာချိန်အထိ စောင့်မျှော်ရင်း မြန်မာပြည်ကြီး လွတ်မြောက်ရေးစိတ်ကူးတွေကို တိုင်ပင်လေ့ရှိတယ်…တဲ့။ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့ အစည်းကိုမဆို အချိန်မရွေး တခါးဖွင့်ပြီး ကြိုဆိုတယ်။ တိုင်ပင်တယ်။
“ဟေ့ကောင်ရ …. ငါတို့ တွေ ဘယ်လို ဆက်လုပ်ကြရင် ပိုကောင်းမလဲ။ ပြောကြ၊ တိုင်ပင်ကြပါဦး ဟ …”လို့ အမြဲတမ်း အားပါးတရ နှုတ်ခွန်းဆက်တတ်တဲ့ ဆရာတော်ကြီး။ “ငါက သာသနာ့အလံတော်ကြီးကို ငါ့လက်နဲ့ မြဲမြဲကိုင်ပြီး လွှင့်လို့ တပ်ဦးကနေ ချီတက်ပြီး မြန်မာပြည်ကြီးထဲကို ပြန်ချင်တာကွ” လို့ ကြွေးကြော်တော်မူလေ့ရှိတဲ့ ဆရာတော်ကြီး။
၁၉၉၀ နှစ်များမှာ သပိတ်မှောက်ကံဆောင်လို့ ထောင် ၂၂ လ အကျဉ်းချခံရတာကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်း သူတို့ နဲ့ အတူ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံရတဲ့ ကိုယ်တော်တွေ ရဲဘက်စခန်းတွေမှာ သေဆုံးပျက်စီးရ ရှာတယ်လို့စိတ်ထိခိုက်ရရှာတယ်။ ယခု ၂၀၀၇ သံဃာအရေးတော်ပုံမှာ ထိခိုက်ကြတဲ့၊ ပျံလွန်ကြတဲ့ သံဃာတော်တွေအတွက် စိတ်နှလုံး ညှိုးနွမ်းပူပန်ရရှာတယ်။ အဲသည်အတွက်သပိတ်မှောက်ကံ ဆောင်ခြင်းကို ဘုရားအဆုံးအမနဲ့ အညီ ထောက်ခံရပ်တည်တော်မူတယ်။
ကျနော်နဲ့ ဆရာတော်ကြီးတို့ ဆုံရတဲ့ ရေစက်က ၂၀၀၇ နိုဝင်ဘာက ၂၀၀၈ ဧပြီ အထိသာဖြစ်ပါတယ်။အဲသည်မှာ ကျနော်တို့ တတွေ၊ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ မိုးမခ၀ိုင်းတော်သားတွေ တတ်စွမ်းသမျှ ဆရာတော်ကြီးအတွက် ဝေယျဝစ္စကလေးတွေ ၀ိုင်းလုပ်ပြီးကုသိုလ်ယူခွင့်ရခဲ့တယ်။ အရိုးသားဆုံး၊ အဖြူစင်ဆုံး၊ အဖြောင့်မတ်ဆုံး၊ အလှပဆုံး သက်ရှိတရားတခုကို ဖူးတွေ့ ခွင့်ရလိုက်တာပဲ။ ဘ၀မှာ ဘာလိုသလဲ၊ ဘာမှ မလိုဘူး။ မသေခင်မှာ ခင်ဗျားတို့တရားမျှတမှုနဲ့ အမှန်တရားအတွက် စက္ကန့်ဝက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် ရပ်တည်ဖူးသင့်တယ်။ ဒါမှ ခင်ဗျား သေပျော်မှာ။ ဆရာတော်ကြီးလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးက သူ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကို ဘုရားအဆုံးအမနဲ့ အစင်ကြယ်ဆုံး အသက်ရှူသွားတာ၊ အမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်သာ ရပ်တည်သွားတာ။
မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်မှာ တည်ဆောက်ကြတော့မဲ့အာဇာနည်မော်ကွန်းတိုက်ကြီးမှာ အညတြတွေ၊ သူရဲကောင်းတွေ၊ သစ္စာရှင်တွေ၊ ရဲဘောတွေ …. သူတို့ အမည်တွေ ကျနော်တို့ တတွေ မမေ့မလျော့ဘဲ ရေးထိုးကြတဲ့အခါ …. အဲသည်မှာ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ဦးကောဝိဒ ဆိုတာကိုပါ အထင်ကရ မှတ်တမ်းတင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ဦးကောဝိဒ အမှတ်ရသမျှ) by (မောင်ရစ်)